The Voice Of Somaliland: Riyaale oo ku tilmaamay ummaddii isu soo baxday mid aan garaynayn waxay rabaan
Riyaale oo ku tilmaamay ummaddii isu soo baxday mid aan garaynayn waxay rabaan
(Waridaad) - Kumanaankii ruux ee khamiistii goboladda dalkoo idil isagu soo baxay si ay dareenkooda ugu muujiyaan inaanay raali ka ahayn ku tumasha xukuumadda Riyaale ee wakhtigeeddii dhamaaday ku hayso dastuurka iyo xeerarkiisa.
Xukuumadda Riyaale iyo Komishinka ayaa dhawaan ku laliyey diiwaangelintii dalka ka dhacday isla markaana dalka ka saaray ha'yaddii deeqbixiyayaashu u soo wakiisheen inay inaga caawiyaan doorashooyinka, taasoo ummaddii ku noqoto wax lala yaabo, dawladaha daneeya qadiyadda Soomaaliland u fasireen inay geedi socodka dimuqraadiyeed ee Soomaaliland ku talaabsatay ay wax badan u dhimi doonto.
Waxaa hadaba xukuumaddu kaga jawaabtay kumanaankii muwaadin ee ka biyo diidanaa dariiqa khaldan ee ay xukuumaddu ku socoto, inaanay wax loo baahan yahay aanu ahayn, isla markaana aanay meeshaba oolin wax laga banaanbaxo, wax kastaana sidii loo qorsheeyey ay u socoto.
Rayaale oo ka jawaabayay su’aal la xidhiidhay arragtidiisa la xidhiidha banaanbaxyaddii Khamiistii ka dhacay Gobolada dalka, wuxuu yidhi “Horta mudaharaadka waa in fasax loo qaataa, waa wax madax banaanida ku fadhiya, laakiin ma aha in mudaharaad uun la iska sameeyo wax wanaagsan ma aha dadkeenuna mudaharaad baahi ay u qabaanba ma jirto wax ay ku mudaharaadaanba ma jiro. Waxaanan jeclahay raggaas saaxiibaday ah ee xisbiyada inay dariiqa sharciyada ku soo noqdaan, oo ay sharciga maraan. Wax kasta oo naga dhaxeeyana in sharciga loo maro ayaan kula tallinayaa qalalaase iyo buuq wadankeenu itaal uu ku qaado ma laha".
Waxuu yidhi Riyaale sharciga ha la maro, hana la ilaaliyo, xisbiyaduna dariiqa sharciyada ha ku soo noqdaan, waxa kaloo u sheegay ummaddii isu soo baxday inaanay waxay isagu soo baxeenba garanayn, wax ay ka banaanbaxaana haba yaraatee aanay jirin oo dawladu kaabto kaalin kasta. Dahir Riyaale waa madaxweynahii ugu nasiibka badnaa Soomaaliland, isagoo noqday kii ugu horeeyey ee ummaddani doorato, ummaddii dooratayna ugu abaal celiyey, garan maysaan waxan aydun ka banaanbaxaysaan.
Waa madaxweynihii ugu mudo kororsiga badnaa intii maamul ee kala danbeeyey, isagoo sharciga mar kastana loo jabinayey hormoodna ka ahaa meel marista sharciyadda dalka ee uu xisbiyada ku boorinayow hada.
Waa madaxweynahii laliyey qodobkii 9aad ee diiwaangelinta
codbixiyayaasha oo ahaa kii uu cuskaday 6da biloodna loogu kordhiyey.
Madaxweynahu ma waxuu ina leeyahay qodobkaas intaan rabay ka helay iminkan looma baahana? Yaa dhinac maraya sharciga hada? Sharciyadda u fasaxday Riyaale iyo Komishinka inay dalka ka saaraan ha'yaddii interpeace meesha uu ka keenay ha sheego? Xaalku miyaanu markaa ahayn anigaa sharciga ka sareeya. Anigaa sharciga ka weyn!Madaxweynahu waxuu ina yidhi:
Anigaa eryey interpeace.
Anigaa ku filan doorashada.
Anigaa bixinaya wixii ku baxaya doorashada.
Anigaa lay doortay.
Anigaa sharciga ah.
Ciddii ka hortimaada xukunkaygana waa danbiilayaal nabadgelyada iyo kala danbaynta carqaladayna, iyagana sharcigaygaan ku qaadayaa, ka dibna Mandheera ayaan maxkamad ku saarayaa!
Codkaaga ku ciil bax muwaadin. Ogow codkaaga ayuu ku fadhiyaa Riyaale madaxtooyadda, kagana saari kartaa. Madaxwynahu wuxuu yidhi, dadkani waxay u banaanbaxaanba ma jiraan.
Maxay u baahanyahiin ee ka maqan? Ku quus qaado muwaadinow, waa kaa caqligii Riyaale.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Saturday, August 22, 2009